ခူမှလိပ်ပြာအထိ - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-02 > အဆိုပါခူကနေလိပ်ပြာအထိ
ခူကောင်ငယ်လေးတစ် ဦး သည်အခက်အခဲဖြင့်ရှေ့သို့ရွေ့သွားသည်။ သူတို့ကပိုမိုအရသာရှိသောကြောင့်အနည်းငယ်မြင့်မားသောအရွက်များရောက်ရှိလိုသောကြောင့်၎င်းသည်အပေါ်သို့တက်သည်။ ထို့နောက်ပန်းတစ်ပွင့်၌ထိုင်။ လေအားဖြင့်လှုပ်ခါနေသောလိပ်ပြာတစ်ကောင်ကိုသူတွေ့ရှိသည်။ သူကလှပပြီးရောင်စုံတယ်။ ပန်းကနေပန်းပွင့်ကိုသူပျံသန်းတာကိုသူမကြည့်နေတယ်။ သူမသည်သူ့ကိုအနည်းငယ်ငြူစူစွာအော်ဟစ်ခဲ့သည် -“ မင်းကံကောင်းတာကပန်းပွင့်ကနေပန်းပွင့်အထိပျံသန်းတယ်၊ ထူးခြားတဲ့အရောင်တွေနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပတယ်။ ငါခြေထောက်တွေအများကြီးနဲ့ဒီနေရာမှာရုန်းကန်နေရတုန်းမြေကြီးပေါ်မှာတွားသွားနိုင်တယ်။ ငါလှပတဲ့ပန်းပွင့်ကိုမသွားနိုင်, အရသာအရွက်များနှင့်ငါ့ဝတ်စားဆင်ယင်တော်တော်လေးအရောင်, ဘဝမတရားဖြစ်ပါတယ်! »
လိပ်ပြာသည်ခူကောင်ကိုအနည်းငယ်သနားပြီးယင်းကိုနှစ်သိမ့်သည် -“ မင်းကငါနဲ့လည်းတူနိုင်တယ်၊ အရောင်တောက်တယ်။ နောက်တော့မင်းရုန်းကန်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ ခူကောင်က“ မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းပြောင်းလဲခဲ့တာလဲ၊ ဘာဖြစ်တာလဲ” ဟုမေးသည်။ လိပ်ပြာကဤသို့ပြန်ပြောပြသည် -“ ငါဟာမင်းလိုခူကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာငါက“ မင်းကိုငါပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ငါ့နောက်သို့ လိုက်၍ ငါမင်းကိုဘဝအသစ်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးမည်။ သင်၏အစားအစာကိုငါစောင့်ရှောက်မည်။ ငါ့ကို ယုံကြည်၍ တည်မြဲတည်မြဲလော့၊ ယခုသင်ရွေ့လျားနေသောအမှောင်ထုသည်သင့်ကိုအလင်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနေဆီသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ »
ဒီပုံပြင်လေးကလူသားတွေအတွက်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်ကိုပြသတဲ့အံ့သြဖွယ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ပါ။ ဘုရားသခငျအားကြှနျုပျတို့မသိမှီခူပျံသညျကြှနျုပျတို့ဘဝနှငျ့တူ၏။ အချိန်ကာလသည်ဘုရားသခင်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကြယ်ပွင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းအထိကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ဆင့်ချင်းစီပြောင်းလဲရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်ရေးနှင့်ကာယရေးအရအာဟာရဖြည့်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူချမှတ်ထားသောပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံသွင်းပေးသောအချိန်။
ခရစ်တော်၌အသစ်သောအသက်တာနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုဒ်များစွာရှိသော်လည်း Beatitudes တွင်ယေရှုပြောလိုသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလူသစ်သို့မည်သို့ပြောင်းလဲစေသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးအရဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အကူအညီကို အရေးပေါ်လိုအပ်နေပါသည်။ “စိတ်ဝိညာဉ်ဆင်းရဲသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏” (မဿဲ 5,3) ဤတွင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်မည်မျှ လိုအပ်ကြောင်းကို စတင်ပြသခဲ့သည်။ သူ၏မေတ္တာအားဖြင့်သာ ဤလိုအပ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ “စိတ်ဆင်းရဲခြင်း” ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ယင်းသည် လူတစ်ဦးအား ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မည်မျှဆင်းရဲကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေသည့် နှိမ့်ချမှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူ၏အပြစ်များကို နောင်တရရန်၊ ၎င်းတို့ကို ဘေးဖယ်ထားရန်နှင့် သူ၏ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သောသူသည် အရာခပ်သိမ်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာ၍ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချမည်ကို သိသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးရှိသော အသက်တာသစ်ကို လက်ခံလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပကတိ၊ ဇာတိပကတိလူများအဖြစ် အပြစ်ပြုလိုသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍မကြာခဏ ထိမိလဲမိလိမ့်မည်၊ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အမြဲတန်းမတ်မတ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ ညံ့ဖျင်းသည်ဟု မသိကြပါ။
ဝိညာဏဆင်းရဲခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ- စိတ်ဝိညာဉ်၌ မာနကြီးခြင်း။ ဖာရိရှဲ၏ဆုတောင်းချက်တွင် ဤအခြေခံသဘောထားကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်– “အကျွန်ုပ်သည် အခြားလူများ၊ ဓားပြများ၊ မတရားသောသူ၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သော၊ သို့မဟုတ် ဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်” (လုကာ ၁။8,11) ထို့နောက် ယေရှုသည် အခွန်ခံ၏ဆုတောင်းချက်ကို အသုံးပြု၍ စိတ်ဆင်းရဲသူ၏ပုံသက်သေကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြသခဲ့သည်– “ဘုရားသခင်၊ အပြစ်ရှိသောအကျွန်ုပ်အား သနားတော်မူပါ။
စိတ်ဓာတ်ကျသူတွေကသူတို့အကူအညီမဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ချေးငှားပြီးဘုရားသခင်အပေါ်မှီခိုနေသည်ကိုသူတို့သိကြသည်။ ဝိညာဉ်ရေးတွင်ဆင်းရဲခြင်းသည်သခင်ယေရှု၏ဘဝသစ်၌လူသစ်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံသွင်းပေးသောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်သည် ခမည်းတော်အား မှီခိုခြင်း၏ ပုံသက်သေဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူ ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်– “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သားတော်သည် မိမိအလိုအလျောက် အဘယ်အရာကိုမျှ မတတ်နိုင်ဘဲ ခမည်းတော်ပြုတော်မူသည်ကိုသာ မြင်တော်မူ၏။ သားသည် ထိုနည်းတူပြုသည်” (ယော 5,19) ဤသည်မှာ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့၌ ပုံဖော်လိုသော ခရစ်တော်၏ စိတ်ဖြစ်သည်။
နှလုံးကြေကွဲသူများသည် မောက်မာခဲလှပြီး ၎င်းတို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြုလိုသမျှကို ပွင့်လင်းမြင်သာကြသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေသူမှာ ဘာလိုအပ်သလဲ။ “ဆင်းရဲသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် စိတ်သက်သာရာရကြလိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,4) နှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်ပြီး ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ ကြေကွဲသောနှလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သူပြောနေတာတွေကို ယေရှုသိတယ်– သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထက် ဝမ်းနည်းမှုနှင့် ဝေဒနာကို ပိုသိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ကြေကွဲသောနှလုံးသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဟု သူ၏အသက်နှင့်စိတ်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရပြီး ဘုရားသခင် အဝေးမှာ ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ခါးသီးစွာ တုံ့ပြန်ပြီး အပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ခရစ်တော်၏ စိတ်သဘောမဟုတ်ပေ။ ခက်ခဲသောဘဝတွင် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သိုမှီးထားသော ဝိညာဉ်ရေးကောင်းချီးများရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ “နှိမ့်ချသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် မြေကြီးကို ပိုင်လိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,5) ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၏ ပန်းတိုင်မှာ မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်ထံ တလိုတလား ပေးဆောင်လိုသော ဆန္ဒဖြစ်သည်။ ငါတို့သည် သူ့အား လက်မြှောက်သောအခါ၊ ထိုသို့ပြုရန် ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏။ တင်ပြခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လိုအပ်ကြောင်း သိရှိလာကြသည်။ နှိမ့်ချမှုက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကူညီပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို သူ့အားတင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်သည့် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောစကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်– “ကျွန်ုပ်၏ထမ်းဘိုးကို ထမ်း၍ ငါ့ထံမှသင်ယူပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် စိတ်နှိမ့်ချ၍ နှိမ့်ချခြင်းရှိ၏” (မဿဲ 11,29) ဘု​ရား​တစ်​ပါး၊ ဘု​ရင်​တစ်​ပါး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့် ဝေးကွာနေပါသည်။ နှိမ့်ချမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့် ကျိုးနွံမှုတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင် ပုံသွင်းလိုသည့် အရည်အသွေးများဖြစ်သည်။
ဖာရိရှဲရှိမုန်ထံ အလည်လာစဉ် ယေရှုသည် လူသိရှင်ကြား စော်ကားခံခဲ့ရပုံကို အတိုချုံး၍ သတိရကြပါစို့။ ခြေမဆေးဘဲ နှုတ်ဆက်သည်။ သူဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ။ သူစိတ်မဆိုးဘူး၊ သူ့ကိုယ်သူ တရားမ၀င်ဘူး၊ သည်းခံတယ်။ နောက်မှ ရှိမုန်အား ဤအရာကို ညွှန်ပြသောအခါ၊ နှိမ့်ချစွာ ပြုတော်မူသည် (လုကာ ၇း၄၄-၄၇)။ နှိမ့်ချမှုသည် ဘုရားသခင်အတွက် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း၊ နှိမ့်ချသူကို အဘယ်ကြောင့် ချစ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ခရစ်တော်၏စိတ်တော်ကို ထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအရည်အသွေးရှိတဲ့လူတွေကို ငါတို့လည်းချစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့သဘောသဘာဝသည် ၎င်း၏တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမျှတမှုကို အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏တရားမျှတမှုကို ပေးသည်– “တရားမျှတမှုကို ငတ်မွတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ရောင့်ရဲကြလိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,6) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တော်၌ မရပ်တည်နိုင်သောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိအမှတ်ပြုသည်။ “ဆာလောင်မှုနှင့် ရေငတ်ခြင်း” သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ စူးရှပြီး သတိရှိမှု လိုအပ်မှုကို ဖော်ပြသည်။ တောင့်တခြင်းသည် ပြင်းထန်သော စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများနှင့် အလိုဆန္ဒများကို သူ၏အလိုတော်နှင့်အညီ ချိန်ညှိစေလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ငတ်မွတ်သောသူ၊ မုဆိုးမများနှင့် မိဘမဲ့ကလေးများ၊ အကျဉ်းသားများနှင့် သူစိမ်းများကို ထိုပြည်၌ ချစ်တော်မူ၏။ ကြှနျုပျတို့လိုအပျသညျ့ ဘုရားသခငျ၏စိတျနှလုံး၏သော့ဖွစျသညျ၊ ဤလိုအပ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သခင်ယေရှုကို ငြိမ်သက်ခွင့်ပေးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမလေးခုတွင်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှလိုအပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤ "ပြောင်းလဲခြင်း" ပြောင်းလဲခြင်း၏အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ဘုရားသခင်ကိုမှီခိုအားထားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တိုးများလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သခင်ယေရှုနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုအလွန်တောင့်တလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်လေးစားမှုလေးခုကကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ယေရှု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကရုဏာကိုကျင့်သုံးသောအခါ၊ လူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ခရစ်တော်၏စိတ်တော် တစ်စုံတစ်ရာကို မြင်ကြသည်။ “သနားတတ်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ကရုဏာကို ခံရကြလိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,7) ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်ကို သိရှိသောကြောင့် ကရုဏာရှိရန် ယေရှုအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ စာနာမှုနှင့် ချစ်ခင်ရသူများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေသောသူများကို ခွင့်လွှတ်တတ်ရန် သင်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားချင်းများအား ခရစ်တော်၏မေတ္တာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဖြူစင်သောနှလုံးသည် ခရစ်တော်ကို ဦးတည်သည်။ “စိတ်နှလုံးဖြူစင်သော သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်ကို မြင်ကြလိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,8) ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်တော်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာတော်မှ လမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံထက် မြေကြီးဆိုင်ရာအရာများထံ သာ၍ပြောင်းလဲပါက၊ ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်နှင့် ခွဲခြားထားသည်။ ယေရှုသည် ခမည်းတော်ထံ၌ မိမိကိုယ်ကို လုံးလုံးလျားလျား အပ်နှံခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုထံ လုံးလုံးလျားလျား ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်သည် ။
ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ “ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။” (မဿဲ၊ 5,9) ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သိုးများပြောင်းရွှေ့မည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အထူးသဖြင့် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ တံတားများတည်ဆောက်စေလိုသည်– “အဖ၊ ခမည်းတော်၊ ကိုယ်တော်သည် ငါ၌ရှိသကဲ့သို့၊ ငါသည် သင်တို့၌ရှိသကဲ့သို့၊ လောကီသားတို့သည်လည်း ငါတို့၌ရှိသင့်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေကို သူတို့အား ပေးတော်မူပြီ၊ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့သည် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ငါသည် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ သင်တို့၌ ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်၍ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် သိစေခြင်းငှာ၊ ငါ့ကိုချစ်သကဲ့သို့ သူတို့ကိုချစ်လော့။” (ယော၊ ၁7,21-၃။ ၄)။
ယေရှုသည် မိမိ၏နောက်လိုက်များအား ဤသို့ကြိုပြောခဲ့သည်– “ကျွန်သည် မိမိသခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲလျှင် သင်တို့ကိုလည်း ညှဉ်းဆဲကြလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လျှင်လည်း သင်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်။” (ယော၊ ၁5,20) လူတွေက ယေရှုကို ဆက်ဆံသလို ငါတို့ကို ဆက်ဆံလိမ့်မယ်။
ဤတွင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဆောင်ခြင်းအတွက် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများအတွက် အပိုကောင်းချီးတစ်ခု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့် ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏” (မဿဲ 5,10).
ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အသက်ရှင်လျက်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏လက္ခဏာရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Beatitudes အားလုံးက ဒီပန်းတိုင်ကို ဦးတည်တယ်။ Beatitudes ၏အဆုံးတွင်၊ ယေရှုသည် လူတို့ကို နှစ်သိမ့်ပေးပြီး မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်– “ပျော်ရွှင်ရွှင်လန်းကြပါစေ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကြွယ်ဝစွာ ချီးမြှင့်ခံရလိမ့်မည်။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ သင်​တို့​၏​ရှေ့​၌​ရှိ​သော ပ​ရော​ဖက်​များ​ကို​လည်း ထို​နည်း​တူ​ပင်​ညှဉ်း​ဆဲ​ကြ​၏။” (မဿဲ၊ 5,12).
ပြီးခဲ့သည့်လေးခု beatitude အတွက်ကျနော်တို့ပေးသူများဖြစ်ကြသည်, ငါတို့ပြင်ပအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်ပေးသူကိုချစ်သည်။ သူကအကြီးမြတ်ဆုံးပေးသူဖြစ်တယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုဝိညာဉ်ရေးအရရောရုပ်ပစ္စည်းပါ ဆက်၍ ပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်အခြားသူများကိုညွှန်ကြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏သဘောသဘာဝကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်သည်။
ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အဖွဲ့ဝင်များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထောက်မသင့်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသောအခါတွင်အမှန်တကယ်စည်းနှောင်မှုစတင်သည်။ ဆာငတ်မွတ်သိပ်သောသူတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးအာဟာရလိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်တွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်မှုအခြေအနေများအားဖြင့်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းကိုတောင့်တကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို ဘုရားသခင်ထံ မပို့ဆောင်မီတွင်၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ကိုယ်တော်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများအား သူ၏ကရုဏာ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့် ငြိမ်သက်မှုကိုပြသသည်။ ပထမဦးဆုံး Beatitudes လေးခုတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အောက်ပါ Beatitudes လေးခုတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အပြင်ပန်းလုပ်ဆောင်သည်။ အတွင်းပိုင်းသည် အပြင်ဘက်နှင့် ညီညွတ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အပိုင်းပိုင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၌ လူသစ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ယေရှုအားဖြင့် အသက်တာသစ်ကို ပေးခဲ့သည်။ ဤဝိညာဏပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ထားရှိရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ဤသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ပေတရုက ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့သတိပေးသည်– “ဤအရာအားလုံး ပြိုပျက်သွားပါက၊ သန့်ရှင်းသောလမ်းလျှောက်၍ သီလရှိခြင်း၌ အဘယ်သို့ရပ်ရမည်နည်း။2. ဓာတ်ဆီ 3,11).
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင် ပျော်ရွှင်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မရောက်သေးသော ပျော်ရွှင်မှု၏ အရသာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ လိပ်ပြာသည် နေဆီသို့ ပျံသန်းစဉ်၊ ငါတို့သည် ယေရှုခရစ်နှင့် ဆုံတွေ့ကြလိမ့်မည်– “ကောင်းကင်တမန် ကောင်းကင်တမန်၏ အသံနှင့် ဘုရားသခင်၏ တံပိုးမှုတ်သံ မြည်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်တိုင် သခင် ကိုယ်တော်တိုင် ဆင်းသက်တော်မူမည်၊ ခရစ်တော်၌ အသေခံသောသူသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ ထိုအခါ အသက်ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသော ငါတို့သည် သခင်ဘုရားကို ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ မိုဃ်းတိမ်၌ သူတို့နှင့်အတူ တချိန်တည်း ချီဆောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ သို့​ဖြစ်​၍​အ​ကျွန်ုပ်​တို့​သည်​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ထံ​တော်​၌​အ​တိုင်း​ရှိ​ကြ​လိမ့်​မည်''(1. သက် 4,16-17) ။
ခရစ္စ Joosten ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်